Alshabaab oo Weraar ku qaaday Saldhigyo AMISOM leeyihiin – Radio Daljir
Maarso 13, 2018 9:15 b 0
Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab, ayaa weeraro kala duwan ku qaaday Saldhigyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose.
Weerarka koowaad, ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Golweyn oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose, halkaasi oo Saldhig ciidamada AMISOM ku leeyihiin lagu weeraray xalay, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay weerarkaasi oo soo gaaray ciidamada AMISOM ee Saldhigaasi lagu weeraray.
Sidoo kale Al Shabaab ayaa weeraray Saldhiga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Ambareeso ee Gobolka Shabellaha hoose, markii Xoogag ka tirsan Shabaab dhawr jiho ay ka weerareen Saldhiga.
Weerarka oo socday muddo ku dhaw saacad, ayaa la tilmaamay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aanan la xaqiijin karin tirada waxyeelada dagaalka.
Al Shabaab ayaa sidoo kale qarax miino loo adeegsaday ka fuliyay Degmada Qoryooley, gaar ahaan goob ay isugu yimaadaan ciidamada, waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare ugu yaraan, hal askari ayaa halkaasi ku dhintay.
Dhalinyarada Qardho oo edeyn u jeediyaay Guddoomiyaha Dhalinyarada karkaar (dhegayso)